डलर २७ महिनाकै बलियो, नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ? Bizshala -
डलर २७ महिनाकै बलियो, नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?
काठमाडौँ । बुधबार अमेरिकी डलरको मूल्य २७ महिनायताकै सर्वाधिक उचाइमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बुधबारका लागि एक अमेरिकी डलरको खरीद दर एक सय ८ रुपैयाँ ६२ पैसा तथा बिक्री दर १०९ रुपैयाँ २२ पैसा तोकेको छ ।
यसअघि २०७२ साल माघ २९ गते डलरको भाउ एक सय ९ दशमलव ४८ रुपैयाँमा रहेको थियो । त्यसपछि डलरको भाउ १०९ रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको यो नै पहिलो हो ।
पछिल्लो समय अमेरिकाले खाडी राष्ट्रबाट तेल आयात कम गरी आफ्नै उत्पादन बढाएसँगै ऊ विश्वमै सबैभन्दा बढी तेल उत्पादन गर्ने देशको नजिक छ । आन्तरिक उत्पादन तथा उत्तरकोरियासँगको तनाव समेत कम भएपछि अमेरिकी अर्थतन्त्र सवल भएका संकेतहरु देखिँदा डलरको भाउले नयाँ उचाई चुमेको हो ।
योसँगै डलरको भाउ मजबुत बन्दै गएको छ भने भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा भारु दिनहुँ अवमूल्यनमा परिरहेको छ । भारु कमजोर हुँदा ऊसँग स्थिर विनिमय भएको नेपाली मुद्रा समेत कमजोर बनेको हो ।
विज्ञहरुले भारतीय रुपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा र कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा यस्तो अवस्था भएको दाबी गरेका छन् । अमेरिकी डलरसँग भारतीय मुद्रा १६ महिनायताकै सबैभन्दा बढी अवमूल्यनमा परेको छ । २०१७ जनवरीपछि भारु सबैभन्दा तल्लो स्तरमा रहेको भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन् । बुधबारका लागि भारतीय केन्द्रीय बैंक(रिजर्ब बैंक अफ इण्डिया)ले भारुको डलरसँगको सटही दर ६७.५२ रुपैयाँ तोकेको छ ।
अमेरिकामा चट्टान प्रशोधन गरी पेट्रोलियम पदार्थ शेल आयलको उत्पादन शूरु भइसकेकाले उसले तेल आयात कम गरेको हो । हाल अमेरिकाले तेल आयातमा व्यापक कटौती गरेको र आगामी केही वर्षमा अमेरिकामा शेल आयलले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्ने विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।
डलर बलियो भन्दा नेपाली मुद्रा सोही अनुसार अवमूल्यनमा पर्छ, जसका कारण आयात गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवा महंगो पर्नेछ । डलरको मूल्य बढ्दा व्यापार घाटा उच्च रहेको नेपाल झनै कमजोर बन्ने र पेट्रोलियम पदार्थ खरीदका लागि समेत बढी रकम खर्चनुपर्ने भएकाले समग्र मूल्य वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
यसैगरी नेपालले विदेशीबाट लिएको ऋणसँग समेत डलरको सम्बन्ध रहेको हुन्छ । डलर महंगो बन्दै जाँदा नेपाली मुद्रा कमजोर हुने भएकाले विदेशी ऋण चुक्ता गर्न खरीद गरिने डलरका लागि थप रकमको जोहो सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
समग्र व्यापार तथा वैदेशिक ऋणमा डलर बढ्दा नकारात्मक असर पर्ने भए पनि रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने राष्ट्रमा यसको असर केही सकारात्मक पनि हुन्छ । विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउँदा नेपालीले तुलनात्मक रुपमा बढी रकम प्राप्त गर्छन् । तर महंगी बढ्ने भएकाले सो रकमले पनि उपभोक्तालाई खासै सकारात्मक प्रभाव पार्दैन ।
us dollar hike impact in nepal
बजारमा अनौठो संयोग: एउटा हाइड्रोमा पोजिटिभ सर्किट लाग्दा
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक स्थिर...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौं । मार्केट डिलरसीपको रिहर्सल गरिरहेको...
यसकारण आवश्यक छ नेपालमा सवल पूँजीबजार
-सुरेश जोशी पूँजी बजार कुनै पनि अर्थव्यवस्थाको जीवनरेखा हो ।...
अपर तामाकोशीमा खरीद आदेशको चाङ, लगानीकर्ता मालामाल !
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार बजार नखुल्दै अपर...
‘सुनको अण्डा’ साबित भो अपर तामाकोशीको आइपीओ, ३ दिनमै रु. १९.१७
काठमाण्डौ । आइपीओले लगानीकर्तालाई कसरी मालामाल बनाइदिनसक्छ भन्ने...
अनलाइन कारोबारमा त्रुटिको जिम्मेवार लगानीकर्ता मात्र हुने
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौं । ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच अनलाइन...
‘पूर्वाधार तयार गरेका बैंकले २ मिनेटभित्र ब्रोकर लाइसेन्स
काठमाण्डौ । नेप्सेका अधिकारीहरुले सबै पूर्वाधार तयार गरी वाणिज्य...
दुई दिन बढेको बजार फेरि किन घट्यो ? यस्तो छ कारण
काठमाण्डौ । दुई दिनसम्म लगातार बढेको बजार बुधबार भने घटेको छ ।...